घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वश्रेष्ठ "Fati“। हाम्रो Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
Ansu Fati बचपन कहानी - मिति को विश्लेषण। क्रेडिट AS र यूईएफए।
विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको मार्ग, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, जीवनशैली, पारिवारिक जीवन आदि शामिल छ।
हो, सबैले फाटीलाई विश्व फुटबलको अर्को ठूलो चीजको रूपमा देख्छन्। यद्यपि केवल अन्सु फातीको जीवनी मात्र केहि थोरैले विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
अन्सुमाने अन्सू फाती अक्टूबर 31 को 2002st दिनमा उनको बुबा, बोजी फाटी (एक पूर्व चालक) र आमा, लुर्डस फाती (घरका कामिवार) को, बिसौ, पश्चिम अफ्रीकाको गिनिया-बिसाउको राजधानीमा जन्म भएको थियो। अन्सु संसारमा दोस्रो छोरा र छोराको रूपमा5बच्चाको रूपमा जन्मेका थिए आफ्ना प्यारा आमा बुबामा तल चित्रित।
अन्सु फ्याती अभिभावक-उनका बुज-बोजी फाटी र मदर-लर्ड्स फाटी। क्रेडिट सेलेब्रिटीबज्
अन्सू फातीको जन्म भएको चार वर्ष अघि उनको आफ्नै देशमा गृहयुद्ध सुरु भयो। यो पछि 2003 मा एक सैन्य कूप पछि भयो, उहाँ जन्म भएको एक वर्ष पछि। यो कुटपिटले उनको देशलाई भग्नावशेषमा छोडिदियो र व्यापक गरिबी पनि तीव्र भयो। अन्सू फातीका आमाबुवा आफ्ना बच्चाहरूको भविष्यको लागि डराउँथे र यसको फलस्वरूप बोरीको बुबाले गिनिया-बिसाउलाई हरिया घाँसको खोजीमा विदेश छोड्नुभयो।
बोरी पहिलो पोर्चुगलमा बसाई सरेका थिए जहाँ उनले कम लीगमा फुटबल क्यारियर सुरु गर्न असफल प्रयास गरे। पोर्चुगलमा छँदा बोरीले अफवाह सुने कि स्पेनको नगरपालिका मरिनालेडाले आप्रवासीहरूलाई काम दिइरहेको छ। आन्सुका बुबाले स्पेनको लागि छिट्टै पोर्चुगल छोडे।
दुर्भाग्यवश, स्पेनमा भाग्यले उनीबाट भाग्यो किनकि बोरीले मरीनालेडाको सडकमा खानाको लागि भीख माग्न थाले। यो अवसर आउनु भन्दा केही महिना लाग्यो जब बोरी फाटीले सेभिलमा मेयर मारिनालेडालाई भेटे जसले उनलाई उनको ड्राइभरको रूपमा कामको प्रस्ताव दिए।
अन्सू फाती एक पटक मारिनलेडाको मेयरको लागि ड्राइभर थिए। क्रेडिट FB
आफ्नो नम्रता र कडा परिश्रमबाट आफ्नो मालिकलाई प्रभावित गरे पछि, मारिनालेदाका मेजरले बोरीलाई आफ्नी पत्नी र बच्चाहरूलाई (अन्सु सहित) गिनी-बिसाउबाट स्पेनमा ल्याउन सहयोग गर्ने निर्णय गरे। अन्सू फाती, उनको आमा, भाइहरू (ब्राइमा र मिगुएल) र बहिनी (Fati Djucu) स्पेन सरेका थिए जब उनी छ वर्षका थिए।
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अन्सु फातीका बुवा गिनी बिसाउको समयमा एक पूर्व फुटबलर थिए। पोर्चुगलमा राम्रो अवसर खोज्नको लागि तपाईले कम तलब पाएको क्यारियरबाट उनी प्रारम्भिक अवकाश लिनुपर्‍यो जहाँ उनी पनि यसलाई बनाउन असफल भए र सेवानिवृत्ति गर्न बाध्य भए। स्पेनमा बसोबास गरेपछि बोरीलाई अवकाशको सामना गर्न गाह्रो भयो। उनले फुटबल बन्न आन्सू लगायत आफ्ना छोराहरूलाई सल्लाह दिने निर्णय गरे।
वर्ष 2009 स्प्यानिश फुटबलको लागि सबैभन्दा प्रिय वर्ष थियो किनकि रियल म्याड्रिडले प्राप्त गर्यो सी रोनाल्डो। त्यस समयमा तल चित्रित अन्सू फाती एक रियल म्याड्रिड फ्यान थिए जसले सुपरस्टारलाई मूर्ति बनाउने सहित क्लबका सबै गतिविधिहरूको अनुसरण गर्‍यो।
Ansu Fati- शिक्षा र क्यारियर निर्माण।
जब ऊ खेल सिकिरहेको थियो, उसको जेठो भाई ब्रिमा धेरै अगाडि थियो। उनीहरूको परिवारको खेलकुद सफलता सर्वप्रथम आन्सुको जेठो भाई ब्रिमा फाटीबाट आएको थियो र उनले सेभिला एफसीबाट हस्ताक्षर गरे। उदाहरणको रूपमा अग्रसर गर्दै, खेलको लागि अनसुको उत्कटताले सेभिला र अन्य नजिकका क्लबहरूसँग ट्रायलमा भाग लिएको उसले देख्यो। जबकि सेविला एफसी परिणाम अवरुद्ध भयो, उनको स्थानीय नजिकैको क्लब हेरेराले स्वीकार्यो।
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
अन्सु फाटीले हेरेरासँग सिजन लिए र अन्ततः सेविला एफसीले आफैलाई स्वीकार्नु अघि। किनभने त्यो राम्रो थियो, दुबै रियल मैड्रिड र एफसी बार्सिलोना एकेडेमी स्काउट्स उनको हस्ताक्षर पछि लाग्यो। उसको शब्दमा;
“म सेविलामा थिए जब रियल म्याड्रिड आए, बार्सिलोना भन्दा राम्रो सर्तको प्रस्ताव राखेर। दुबै क्लब मेरो परिवारको आमा बुबाआमालाई मनाउन आए। यो विकासले सेविलालाई पागल बनायो किनकि उनीहरू मेरो भाइलाई मद्दत गरेर म बसेको चाहन्थे "
उनीहरूको स्टार बच्चा हराउने स्थानान्तरण जटिलताको कारण सेभिलाले एक वर्षको लागि फुटबल न खेले अनसूलाई छोडेर गयो। यो प्रो बन्न उसको सपनाहरु लाई रोक्न कुनै ढिलाइ सिर्जना गरेन। यसको प्रतिक्रियामा, एफसी बार्का एकेडेमी- ले मासियाले समस्यामुक्त बच्चा पाउनको लागि कार्य गर्नुपर्‍यो। उनीहरूले नौ वर्षको अन्सू फ्यातीलाई लगे र उनको क्यारियर सुरु गर्न आवश्यक आधार दिए।
अन्सु फिटी लेमेसियाको साथ प्रारम्भिक जीवन। क्रेडिट सेलेब्रिटीबज्
अन्सू फाती एफसी बार्सिलोनाको प्रख्यात एकेडेमी ला मासियाको साथ एक छाप बनाउन द्रुत थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उहाँ एक पटकको साथ साथी हुनुहुन्थ्यो टेकफुसा कोबो AKA यो जापानी मेसी पहिले कोबो रियल मैड्रिडमा सामेल भएपछि जीवनले उनीहरूलाई अलग गर्यो। दुबै बच्चाहरू (तल चित्रण गरिएको) जो सबै भन्दा राम्रा साथीहरू थिए पनि विभिन्न अवसरहरूमा एकेडेमीमा शीर्ष स्कोररहरू थिए। थोरैलाई थाहा छ उनीहरू आफ्नो 20th जन्मदिन अघि प्रतिद्वन्द्वी हुनेछन्।
अंसु फाति र टेकफुसा कुबोले ला मासियामा आफ्ना दिनहरूमा मुख्य समाचारहरू बनाएका थिए। क्रेडिट Trome
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
अन्सू फातीले किशोरावस्थाभन्दा पहिले नै ला मासियाको साथ प्रभाव पार्न शुरू गर्यो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… ऊ प्रक्रियामा कप्तान बन्न धेरै चाँडो माथि सर्‍यो।
प्रमाण कि Anu Fati कुनै समय एक ला मासिया क्याप्टेन थिए। आईजी लाई क्रेडिट
अन्सुले कप्तानको रूपमा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न लागेको बेला, उनको युवाको क्यारियरको सबैभन्दा कम क्षण भयो। ऊसँग एउटा डरलाग्दो डबल खुट्टा थियो। यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना डिसेम्बर एक्सएनयूएमएक्समा भयो जब एक एस्पेनियोल डिफेन्डरको कडा समस्याले अन्सू फ्याटी दुबै टुबिएको टिबिया र फिबला उसको दाहिने खुट्टामा छोडियो। यसले उनलाई अस्पतालमा धेरै समय र एक धेरै महिनाको अवधिमा बाध्य पार्‍यो। तल ब्रामाले भाइको ठूलो भूमिका खेल्दै छ जब उहाँ आफ्नो रिकभरीको समयमा आफ्नो सानो भाइको छेउमा बस्नुहुन्छ।
अन्सू फातीलाई उसको भाईले स्वास्थ्य लाभको बेला हेरचाह गरिरहेका थिए। आईजी लाई क्रेडिट
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
धेरै प्रशंसकहरू जसले अन्सु फाटीलाई चिन्छन् उनीसँग सहमत हुनेछन् कि उनको खुट्टामा चोट लागेको चोट उसको जीवनको मुख्य मोड हो। अझै आफ्नो रिकभरी ओछ्यानमा हुँदा, अन्सू फातीको दृढ संकल्प बढ्यो र उनी r लाई प्रमाणित गर्न बिन्दुको साथ फिट भएबिग्रने भन्दा ather। उनले हालैका महीनामा एफसी बार्सिलोना एकेडेमीको सबैभन्दा ताजा सम्पत्ती बन्नको लागि प्रख्यात लोकप्रियतामा वृद्धि गरे।
अन्सू फातीको meteoric वृद्धि चोटपटकबाट रिकभरी पछि प्रतिष्ठित भयो। आईजी लाई क्रेडिट
अन्सू फातीले युवा फुटबलमाथि प्रभुत्व जमाए र आफ्नो स्वास्थ्यप्राप्ति पछि पनि त्यसो गर्न जारी राखे। 24 जुलाई 2019 मा, उनले एफसी बार्सिलोना वरिष्ठ टीमसँग आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, 2022 सम्म एक सम्झौताको लागि सहमति जनाए। यस समयमा, उसको नयाँ सम्पर्क पछि, उसको परिवारको प्रत्येक सदस्य आफ्नो पहिलो फिल्मको लागि चिन्तित भए।
प्रतिबन्ध: पर्खाइ अझै जारी भएको बेला, त्यसबेला 16 वर्ष पुगेको अन्सु फतिको स्प्यानिश नियमन अन्तर्गत फुटबल न खेल्न प्रतिबन्ध थियो जब यो9साँझ भयो। स्पेनमा नियमहरु मा मांग गर्दछ कि क्लबहरु नाइट फिक्स्चरको समयमा नाबालिग खेलाडीहरु खेल्न सक्दैनन् जबसम्म उनीहरूका अभिभावकले पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्दैनन्।
संग Ousmane Dembele र Luis Suarez घाइते बाहिर, बार्काको प्रबन्धक Ernesto Valverde अन्सू फातीलाई शट दिने निर्णय गरे। भाग्यवश गुयना बिसाउको केटाका लागि, उनका आमा बुबाले उनलाई रात जोखिममा राख्न र आफ्नो सपनाहरू पूरा गर्न घर छोड्न स्वीकार गरे।
अन्सू फ्याटी केवल 16 वर्ष र 298 दिन पुरानो हो त्यस समयमा उसले आफ्नो बेल्ट मुनि पहिलो मिनेट पायो। यस डेब्यूले उनलाई भिसेन्क मार्टिनेज (1941 बर्ष र 16 दिन) पछि 280 पछि क्लबको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा कान्छो खेलाडीको पुरस्कार कमायो। अन्सूले तल चित्रित एफसी बार्सिलोनाको कान्छो लालिगा गोल स्कोरर बन्ने रेकर्ड पनि जित्यो।
अन्सू फातीले बार्काको कान्छो लालिगा गोल स्कोरर बन्ने रेकर्ड जित्यो। क्रेडिट SL
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अन्सूको उपस्थिति र गोलले भीडबाट एक ठुलो उत्साह प्राप्त गर्‍यो, जसमा छोरा थिआगो पनि थिए लिओनेल मेस्सी जो खडा देखि उसलाई देख्यो। कुनै शंका बिना, Ansu क्लबले अफ्रिकी संलग्नताको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञाहरू पछि उनले क्लबको स्ट्राइकिंग फोर्सको साथ प्रमाणित गरे भन्ने कुरा उनले विश्वमा प्रमाणित गरिसकेका छन शमूएल इटो. बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको ख्याति बढेको संग, यो निश्चित छ कि सबै प्रशंसकहरु द्वारा अन्न्सू फाती प्रेमिका को हुन को लागी सोधपुछ गर्नु पर्छ। आफ्नो बच्चाको अनुहार, सुन्दर देखिन्छ आफ्नो खेल को शैली संग राम्रो देखिन्छ कि महिलालाई एक प्यारो दाखको बोट बनाउन छैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार कुनै छ।
Ansu Fati प्रेमिका को हो? आईजी लाई क्रेडिट
लेख्ने समयमा, उसको सामाजिक मिडिया ह्यान्डलमा रहेको सूचनाको आधारमा, यस्तो देखिन्छ कि अन्सू फातीले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाएका थिए। त्यहाँ कुनै जानकारी छैन जुन उसको निजी जीवनमा कुनै स्पटलाइट प्रकट गर्दछ। यस तथ्यले मिडियालाई कुनै पनि जानकारी स collect्कलन गर्न गाह्रो बनाउँदछ उसको वर्तमान प्रेम जीवन र डेटि history इतिहासको सम्बन्धमा।
यद्यपि उनको युवा उमेर र एफसी बार्सिलोनाले युवाहरुलाई माफ गर्न मिल्दैन जो प्रभावित गर्न सक्दैनन् भन्ने कारणले गर्दा, हुन सक्छ कि अन्सु फाटीले कसैलाई डेटि not नगरेको हुनसक्छ तर स्पेनी विशालका साथ ठूलो बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको हुन सक्छ। तर कसलाई थाहा छ? !!... त्यहाँ आफ्नो उमेर को धेरै जवान मानिसहरु जो अझै गर्लफ्रेंड छन्। यसैले हामी अनुमान गर्न सक्दछौं कि उसकी एक प्रेमिका हुन सक्छ तर उसले सार्वजनिक गर्न चाहँदैन।
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
अन्सू फातीको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गर्दै, ऊ द्रुत-विवेकी र बुद्धिमान छ, कुनै व्यक्ति जसले अनुसन्धान गर्छ जब सम्म उसले अपेक्षा भन्दा बढीको आफ्नै अनौंठो तरिका फेला पार्दछ। साथै, Ansu Fati एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सजिलैसँग उर्जाहरु लाई अनुकूलन गर्न सक्दछ (दुवै सकारात्मक र नकरात्मक) जो वरिपरि छ। अन्तमा, उहाँ एक गहिरो चिन्तक पनि हुनुहुन्छ जसले कहिलेकाहिँ एक्लै बस्न रुचाउनुहुन्छ र आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापना गर्न सबै चीजबाट टाढा राख्नुहुन्छ।
Ansu Fati निजी जीवन तथ्यहरु - आफ्नो व्यक्तित्व चिन्न। आईजी लाई क्रेडिट
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
जीवनमा ठूला चीजहरू प्राप्त गर्न तपाईं आफ्नो मुखमा चाँदीको चम्चाको साथ जन्मनुपर्दैन। यी शब्दहरूले अन्सु फाती र उसको परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई ठूलो चित्रण गर्दछ।
Ansu Fati परिवार सदस्यहरु। आईजी लाई क्रेडिट
आफ्नो छोराको बार्सिलोनाको लागि पहिलो प्रतिस्पर्धी खेलको बारेमा कुरा गर्दा अन्सु फाटीका बुबा बोरी एक पटक भावनात्मक भए। उनका शब्दहरूमा:अब म आज मर्न सक्छु! मेरो जीवन आज मृत्यु भैसकेको छ। ”बोरीले स्थानीय रेडियोलाई आफ्नो छोराको पदार्पण गरेको देखेर भन्छन्। उहाँ मिडियाको वरिपरि हुनुहुन्छ आफ्नी श्रीमती (अन्सु फातीको आमा) जस्तो नभई जसले न्यून प्रोफाइल राख्छ।
अन्सू फातीका भाइहरूको बारेमा: सबै Ansu Fati को भाइहरू अर्थात्; ब्राइमा (उसको जेठो) र मिगुएल (तत्काल कान्छो) र मिगुएल (सबैभन्दा कान्छो) पनि फुटबल खेलाडी हुन्, तिमी अन्सु जत्तिकै सफल भएनौ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अन्सु फाटीको कान्छो भाइ (मिगुएल) नजिकको साथी र साथीको साथी हो थिआगो मेसी (लियोनेल मेसीको छोरो) दुबै लेखन को समयमा एफसी बार्काको एकेडेमी- ला मासियामा भाग लिन्छन्। जतिसुकै समय र फ्यातीको परिवार स्पेनमा बसाइँ सर्ने क्रममा यो कुरा निश्चित छ कि सुन्दर मीगुएल (तल चित्रमा) स्पेनमा जन्मेका थिए।
मिगुएल फाटी- अन्सुको भाईलाई भेट्नुहोस्
एसाइड्स ब्रामा (अन्सुको जेठो भाई), उनका अन्य भाइहरू एफसी बार्सिलोनाको प्रख्यात एकेडेमी ला मासियाका लागि खेल्छन्। हेरचाह गर्ने ठूलो भाई ब्राइमा हाल लेख्नको लागि जस्तै Calahora को लागि loanण मा छन्।
Ansu Fati भाई- मिगुएल Fati। आईजी लाई क्रेडिट
Ansu Fati बहिनी को बारेमा: द्जुकू अन्सू फातीको सुन्दर बहिनी हो। उनी आफ्नो दाइ अन्सु भन्दा दुई बर्ष कान्छी हुन सक्छिन्। उनको इन्स्टाग्राम खाताका अनुसार, जाजु प्रत्येक जनवरी 20th मा उनको जन्मदिन मनाउँदछन्।
अन्सु फतिस सिस्टर - जुजु फुटीलाई भेट्नुहोस्। उनको आईजी खातामा क्रेडिट
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
फातीको लागि, त्यहाँ फुटबल खेल्ने र रमाईलो गर्ने बीचमा स्पष्ट भिन्नता छ। जब फुटबलको मौसम समाप्त हुन्छ, अन्सु फाटी आफूलाई इबीजा र स्पेनमा अन्य सुन्दर ठाउँहरूमा रमाउन मनपर्दछ। उहाँ प्रायः याट र डुoe्गामा एकल सवारी देख्नुहुन्छ।
Ansu Fati- स्पेनिश सागर र कन्ट्रीसाइडका प्रेमी। आईजी लाई क्रेडिट
अनुसु बजेटमा टाँस्न पर्याप्त अनुशासित छ। उदाहरण को लागी, ऊ औसत कारहरु र नन-पावर बाइकमा चिप्लन्छ। उनी आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई राम्रो आर्थिक स्थितिमा ल्याउन कडा परिश्रमबाट डराउँदैनन्।
Ansu Fati कार र राइड- LifeStyle तथ्यहरु। आईजी लाई क्रेडिट
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्य
लिओनेल मेस्सीका साथ कूल साथीहरू: अन्सू फातीको जादुई रात जुन उनले पहिलो ला लिगा गोल गरे पछि अन्तिम वेशल पछि अझ राम्रो भयो। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... खेल पछि, भाग्यशाली चापले आनन्दित लियोनेल मेस्सीले सुरुnelमा न्यानो अँगालो प्राप्त गर्‍यो। बहु-समय संसारको सर्वश्रेष्ठ खेलाडीले फोटो (तल) आफ्नो इन्स्टाग्राम खातामा साझा गरे जुन लेख्ने समयमा 6.3 लाख भन्दा बढी लाइकहरू प्राप्त गर्‍यो।
अन्सू फाती र लियोनेल मेस्सी असल साथी हुन्
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अन्सू फातीको मेस्सीको नजिकको सम्बन्ध पनि उसको कान्छो भाइ र सुपरस्टारको छोरो थियागो मेसीबीचको सम्बन्धको परिणाम हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।